विदेशमा श्रीमान नेपालमा अर्कै सँग श्रीमती, जब यी श्रीमानले थाहा पाए छाप्टाई दिए खुकुरीले, श्रीमतीको मृत्यु, हेर्नुहोस् भिडियो ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारविदेशमा श्रीमान नेपालमा अर्कै सँग श्रीमती, जब यी श्रीमानले थाहा पाए छाप्टाई दिए खुकुरीले, श्रीमतीको मृत्यु, हेर्नुहोस् भिडियो !
November 23, 2020 admin समाचार 2615
झापाको गौरादह नगरपालिका-१ मा एक महिलाको ह’त्या भएको विषयमा अनु-सन्धान गरिरहेको प्र’हरीले घ’टनामा संलग्न रहेको भन्दै उनका श्रीमान लाई प’क्राउ गरी अनुसन्धान गर्दै थियो । ती महिलाका श्रीमान लाई पु’र्पक्षका लागि जे’ल चलान समेत गरि सकिएको छ।
यो घ’टना सेलाउन नपाउँदै झापाकै कमल गाउँ-पालिकामा फेरी अर्को
त्यस्तै घट’ना भएको छ । झापाको कमल गाउँपालिका-६ जिवन-चोकमा खेतीमा गएका समयमा एक पुरुषले आफ्नै श्रीमती-लाई खु’कुरी प्रहा’र गरी बी’भत्स ह-त्या गरेका छन् ।
आइत-बार साँझ भएको यो घट’नामा संलग्न पुरुषलाई प्रह’रीले नियन्त्र’णमा लिइसकेको छ। घट’नाका विषयमा थप अनु-सन्धान भइरहेको दमक प्रह’री प्रमुख प्र’हरी नायब उपरि’क्षक विजयराज पण्डितले जान-कारी दिएका छन् ।
किन मा’रे श्रीमानले आफ्नै श्रीमती? यस्तो छ घट’नाको नालीबे’ली
झापाको दमक नगर-पालिका-१ मामा चौक बस्ने ४७ वर्षीय चूडामणि भण्डारीले २२ वर्ष वैदेशिक रोज-गारीमा बिताए । उनले आफ्नो जीव’नको ऊर्जा-शील समय विदेशमा पसिना बगाएर केही धन-सम्पत्ती पनि जोडजाम गरेका थिए।
जब उनी गत भदौ’मा स्व’देश फर्किए । त्यसपछि ३७ वर्षीय निजकी श्रीमती टीका-मायाले अनेक बहाना-बाजी सुरु गर्न थालिन। उनी हरू गत भदौदेखी एकै स्थानमा बसेका समेत थिएनन्।
चूडा मणिले कमल गाउँपालिका-६ जीवन चोकमा केही जग्गा समेत जोडेका थिए। काम-गर्ने कोही नभए-पछि उनले धान खेतीगर्न अरु लाईनै दिएका थिए । घ’टना भएको दिन अर्थात् आइत-बार चूडामणि आफ्ना अरू २ जना नातेदारसहित सो स्थानमा धान जिम्मा लिन पुगेका थिए ।
उनकी श्रीम’तीले पनि आफू लाई धान चाहिने भन्दै उनी सँग केही अघि-देखी नै विवा’द गर्दै आएकी थिइन। जब चूडा’मणि धान लिन आफ्नो खेतीमा पुगे । त्य’सको केहिबेरमै श्रीमती टिका-माया पनि सो स्थानमा प्रकाश’चन्द्र दाहालको मोटर’साइकलमा चढेर पुगिन ।
जब त्यहा श्रीमान्श्री-मतीको भेट भयो । त्यस’पछि चूडा’मणि र प्रकाश’बिच केही भना’भन समेत भएको प्रत्यक्ष’दर्शीलाई उदृत गर्दै इलाका प्रह’री कार्यालय दमकका प्रमुख विजयराज पण्डितले बताए । त्यस लगत्तै चूडा मणिले आफूले झोलामा बोकेर लुकाइ’छिपाई लगेको धारि’लो खुकु’री निकालेर प्रकाशलाई टाउकोमा प्र’हार गरे ।
प्रकाश लाई खुकु’री हानेको देखेपछि धान का’ट्दै गरेकी एक महिलाले हार-गुहार गरिन। त्यतीनै बेला प्रकाश त्यहा’बाट भाग्न सफल भए । उनलाई उप’चारका लागि दमक स्थित एडभान्स अस्पता’ल ल्याईएपनि त्यहा उपचार सम्भव नभएपछि तत्कालै बिर्तामोड स्थित बि एण्ड सि अस्पता’ल बिर्तामोड लगियो ।
आज बिहान दमक प्र’हरी प्रमुख पण्डितले दिएको जानकारी अनुसार अहिले प्रकाशको स्वास्थ्यमा क्रमिक सु’धार आएको छ । उनी अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
यता प्रकाशलाई खुकुरी हानेका चूडा मणिले थप आक्रो’शमा आए यसलाई पनि सिध्याउँछु भन्दै श्रीमती-माथी पनि अन्दाधुन्द खु’कुरी प्रहा’र गरे । खुकु’री प्रहा’रबाट टिकामायाको घटना’स्थलमै ज्यान गएको थियो ।
ह’त्यापछि प्रहरीलाई खबर गर्न चूडामणिकै आग्रह
जब चूडा-मणिले आफ्नी श्रीमतीको ह’त्या गरे त्यसपछि त्यहा होहल्ला र हार’गुहारको चित्का’र सुनेर गाउँलेहरू भेला भए । तर कसैलेपनि चूडामणिको हातमा रगत लत्पतिएको खुकुरी खोस्ने हिम्म’त गर्न सकेनन् ।
बरु चूडामणि आफैले मैले यसलाई मा’र्नु थिए मारे, म कसैलाई केही गर्दिन अब प्रहरी लाई खबर गर्दिनुस् भने । त्यस’पछि स्थानीयले प्रह’रीलाई घट’नाबारे जानकारी गराए । प्र’हरी घटना-स्थलमा पुग्दा चूडामणिले घटना’स्थलमै आफ्नो अप’राध स्वीकार गरेको दमक प्रह’री प्रमुख पण्डितले बताए ।
ह’त्या मुख्य कारण पारिवारिक बेमेल : प्रहरी
घ’टना को भोलिपल्ट सोमबार अर्थात् आज बिहान हामीले घ’टनाका बारेमा थप जानकारी लिन इलाका प्रह’री कार्यालय दमकका प्रमुख विजयराज पण्डितलाई भेट्यौँ । उनले यस घट’नाको मुख्य कारण पारिवारिक बेमेल नै रहेको अभि’युक्तले बयान दिएको बताएका छन् ।
आफू २२ बर्षजति विदेशमा बस्दा कमा’एको पैसा हिनामिना गरेको र पर’पुरुषसँग बढी हि’मचिम बढाएको देखेपछि आफूले आ’वेगमा आएर श्रीमतीको ह’त्या गरेको चूडामणिले स्वीकार गरेको प्र’हरी प्रमुख पण्डितले बताए । उनलाई म्याद थपका लागि आज झापा जिल्ला अदा’लत लगिएको पण्डितले जानकारी दिए । -कपुरीन्युज बाट
December 22, 2020 admin समाचार 3557
February 9, 2021 admin समाचार 2032
November 1, 2020 admin समाचार 6127
झापा ,दमक । केहि समय आगाडी झापाको दमकमा ५ रुपैयाँमा सादा खाना र १० रुपैयामा मासु खाना पेटभरि खुवाउने कुमार राइ सामाजीक सेवामा तिब्र गतिमा लागेका छन् । उनीहरुले भोकाएका मानिसलाई शुद्ध खाना खुवाउने र